कोरोना दशैँमा हाम्रो भूमिका - Enepalese.com
कोरोना दशैँमा हाम्रो भूमिका
दीपक पन्त २०७७ कार्तिक २ गते १६:३३ मा प्रकाशित
बिश्व मानचित्रमा नेपाल राष्ट्र साथै बिश्व भर छरिएर बसेका नेपाली समुदायका बीच हिजो आज बिषेशत हिन्दु धर्मावलम्बी नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैँको जति चर्चा छ । त्यस कै हाराहारीमा बिगत केहि समय देखि बिश्व संजालमा देखिएको यो कोरोना कहरको सन्त्रास र परिचर्चा रहदै आएको छ।
नेपालमा या अमेरिका वा संसारको जुन सुकै कुना मा होस् हामी जहाँ छौ । त्यहाँ हामी सानो नेपाल बनाउछौ । अनि नेपाली रहनसहन भाषा ,सस्कृति एवं हाम्रा चाडपर्वहरु मनाउछौ । यसरी हेर्दा हाम्रा भाषा ,सस्कृति,रीतिरिवाज चाड पर्व नै हाम्रो अस्तित्व हो । हाम्रो गहना हो ।
यसरी हामी र हाम्रो पहिचान भित्र जोडिएको कुरालाई यस बर्ष कसरी मनाउने भन्ने बिषयमा हरेक नेपाली समाजमा छलफल /बहस हरू चलेका छन ।अर्का तर्फ गत बर्ष चीनको बुहान क्षेत्रबाट देखा परेको यो महामारी कोभिड १९ ले झन्डै एक बर्षको अन्तरालमा बिश्व जगत नै यसको चपेटामा परेको तथ्य जन जाहेर नै छ ।
यसरी फैलदो कोभिडको -१९ भाइरसको अबस्था र यसको नियन्त्रणका लागि बिश्वका बैज्ञानिकहरुले गरेको अथक प्रयासका बाबाजुद पनि एक ठोस निस्कर्ष ननिक्लिएको अबस्थामा यथास्थिति ढंगबाट हाम्रा चाड पर्व बिशेष मनाउनु पनि कति हितकर वा सुरक्षित छ ? चेपिलो प्रश्न उजागर भएको छ ।
निश्चित रुपमा हामीले हाम्रो धर्म सस्कृति जगेर्ना गर्दै जादाँ मानब सभ्यता माथि नै प्रश्न उठाएको यो माहामारी कोरोनाको अबमुल्यन गर्नू ठूलो भुल हुनेछ । अत: यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा सुझपुर्ण निर्णय लिनु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ । यसकारण यसपालीको बडा दशैँ नेपालमा होस् या प्रवासमा अलि फरक ढंग ले मनाउनु पर्ने आबस्यकता देखिएको छ ।
चाडबाडमा हुने जमघट /भिडभाड ,खान पान आदिको उचित ब्यबस्थापन गरि आफू,आफ्नो परिवार,समाज अनि देशको स्वास्थ्य लाभ पुग्ने गरि असल एबं सचेत नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने अबस्था देखिएको छ ।
कोभिड-१९ का बारेमा अमेरिकन डा एन्थोनी फाउसीका अनुसार “ट्रायल रुपमा रहेको भ्याक्सिनले मूर्त रुप नलिए सम्म विना माक्स यो भाइरस सँग जुध्नु महा मुर्खता हो”
त्यस्तै नेपालका बरिष्ठ सरुवा रोग बिशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुनको बिचारमा “ प्रत्येक मानिसको इम्म्युनिटि पावर कुन लेबलमा छ ? भनि छुट्याउन निक्कै गाह्रो कुरा हो । यहि भाइरसले कसैलाई सामान्य असर गर्दछ । तर कसैलाई मृत्यू शैया सम्म पुर्याउन सक्छ । सामान्य मात्र असर गरेको ब्यक्ति स्वयमका लागि यो भाइरस खतरा नभए पनि उसको सानो लापर्वाहीले ऊ क्यारियर बनि कमजोर इम्म्युनिटि पावर भएका व्यक्तिहरुका लागि ठूलो जोखिम हुन सक्छ।
अत: जो ,जहाँ ,जसरी छौ,त्यसरी नै रमाऔ । चाडवाडको नाममा जन स्वास्थ्यका बिषयमा खेलबाड नगरौ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी नियमहरू आफू पनि पालन गरौर अरुलाई पनि पालन गराउन चेतना जगाऊ ।
समग्र अर्थ ब्यबस्था ठप्प बनाउने गरी लक् डाउनको दलदलमा फस्नु भन्दा बेलैमा रोग संक्रमण हुनबाट सकेसम्म रोकथाम गरि उज्यालो भविष्यका लागि सबै मिलि प्रयत्न गर्नू नै हितकर हुनेछ ।
अत: यो बर्षको दशैँलाई बिशेष सतर्कतका साथ मनाउनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । युगले दिएको विज्ञानको नयाँ प्रविधि अनुसार भर्च्युअल माध्यमबाट गर्न सक्ने कुराहरु त्यसरी नै गर्न उपयुक्त हुनेछ । आखिर दशैको आशिर्वाद लिने दिने कार्य पनि सकेसम्म यो बर्ष फिजिकल भेटघाट का अलावा भर्च्युअलबाट नै गर्नु /गराउनु बान्छनीय हुनेछ ।
हामीले यस अघि त्यति साह्रै चलन चल्तीमा नल्याएको अनलाइन स्कुल, मिटिंग ,छलफल, बहस,अन्तरक्रिया पनि त हामी हिजो आज सतर्कताका साथ अनलाइन गरि रहेका छौ । त्यसो भए यो बर्षको टीका /जमरा आशिष आदि धार्मिक सास्कृतिक कार्यलाई अन्नलाइन किन नगर्ने ?
“जिइ रहे घिई खान पाईन्छ” भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ पनि हामीले यो संक्रमणको बेलामा थप सजकता अपनाउनु बुद्दिमानी हुनेछ । समय छदै थप जिम्म्मेबारिका साथ प्रस्तुत हुन् सबै जन समुदायमा अनुरोध छ । बेला बिते पछिको दौड़ाईले गतब्य हाँसिल गर्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिर हुनेछ ।